Akụkọ - Na -ekwu maka ngwugwu usoro kemịkalụ
Na -ekwu maka ngwugwu usoro kemịkalụ
Nchịkọta usoro kemịkalụ bụ isi ihe na -emepụta kemịkalụ ma na -arụ ọrụ dị mkpa na usoro mmepụta kemịkal.
Mmepe ngwugwu usoro bụ ọrụ nhazi, nke kwesịrị itinye ọtụtụ isiokwu na sayensị dị iche iche, ọ na -esikwa ike ịmecha ya n'onwe ya. N'ozuzu, mmepe ngwugwu usoro na imewe ya bụ nke R&D, usoro kemịkalụ, sistemụ usoro, nyocha na nnwale, njikwa akpaka, ihe, nchekwa na ahụike, nchekwa gburugburu ebe obibi na ọzụzụ ndị ọzọ.
Ngwaahịa emechara nke ngwugwu usoro a ga -agụnye ntuziaka, eserese usoro, mbipụta mbụ nke P & ID, akụrụngwa akụrụngwa akwadoro, ndepụta akụrụngwa akụrụngwa, mpempe data nke akụrụngwa, mpempe akwụkwọ nchịkọta na kemịkal, mpempe akwụkwọ nchịkọta ihe nlele, akwụkwọ ntuziaka, ntuziaka nchekwa, akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ data anụ ahụ yana mgbako dị mkpa.
Usoro mmepụta kemịkalụ gụnyere mmeghachi omume na nkewa. Usoro mmeghachi omume bụ isi mmepụta kemịkalụ, na usoro nkewa bụ ụzọ dị mkpa iji hụ na ịdị ọcha ngwaahịa.
Ọrụ nke usoro mmeghachi omume bụ ịchọpụta ụzọ mmeghachi omume wee nweta ọnọdụ mmeghachi omume kacha mma site na njikarịcha oke. A ga -atụle ihe ndị a nke ọma na nhọrọ nke ụzọ na ọnọdụ: mkpụrụ, ntụgharị, nhọrọ, oriri ike, nchekwa, nkwụsi ike, corrosivity ọkara, ikike ịgwọ ihe mkpofu atọ, itinye akụrụngwa, ọnụ ahịa ọrụ, wdg.
Oge ezipụ: Jul-27-2021